popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​) – Page3– PoPinVdo
September 18, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)celebrity / အချစ်​+ရသNo Comment on ချစ်သူတွေကြားထဲက အကြီးမားဆုံးလွဲချော်မှုကို ထောက်ပြလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း
ပရိသတ်အချစ်တော် မအေးသောင်းတစ်ယောက် သူမရဲ့အမိုက်စား ဒဿနတစ်ခုကို ပြောပြ လိုက် တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲလိုလို အမိုက်စားအတွေးအခေါ်တွေကို မျှဝေလေ့ရှိပြီး ဒီတစ် ခေါက်မှာတော့ Relationship တော်တော်များများမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာလေးကို သူမ က လှလှပပ ထောက်ပြသွား…
သနပ်​ခါး ကြိုက်​တဲ့ မိန်းခ​လေး ​တွေ သိထားသင့်​တဲ့ ဗဟုသုတ ​လေးပါ
September 18, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)အလှအပ​ရေးရာNo Comment on သနပ်​ခါး ကြိုက်​တဲ့ မိန်းခ​လေး ​တွေ သိထားသင့်​တဲ့ ဗဟုသုတ ​လေးပါ
မေမေ ပြောပြတဲ့ ပျိုမေ တို့အကြိုက် သနပ်ခါး ကျောက်ပျဉ် သနပ်ခါး ကျောက်ပြင် အသစ်ဆိုရေလေးဆေးလိုက်ပြီးသနပ်ခါး တုံးသွေးထည့်လိုက်တာပဲအဲသလိုလုပ်လို့မရပါဘူး ကျောက်သား အစစ်ကိုထွင်းထားတဲ့ ကျောက်ပျဉ် ဖြစ်ဖြစ် ဘိလပ်မြေ လိုမျိုးကိုပုံပြု့ထားတဲ့ကျောက်ပျဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးအသုံးမပြု့ခင်မှာ ဝယ်လာတဲ့ကျောက်ပျဉ်ကိုရေစင်စင်ဆေးပြီး ကျောက်ပျဉ်ကိုရေပုန်းထဲကိုထည့်ပြီးရေနဲ့တစ်ညစိမ်ထားပါ နောက်တစ်ရက်မှာနနွန်းတက်နဲ့+ဆားနဲ့ကိုသွေးပြီးတစ်နေကုန်နေလှမ်းထားရပါတယ်ဆီခြောက်တော့မှ သနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ကိုရေထပ်ဆေးပြီးမှမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ…
နာမည် သိရုံဖြင့် စိတ်ဓါတ်ကို သိနိုင်အောင် တွက်နည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
September 18, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)​ဗေဒင်​No Comment on နာမည် သိရုံဖြင့် စိတ်ဓါတ်ကို သိနိုင်အောင် တွက်နည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
သင့်ရဲ့ နာမည်ကို ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်နေ သဘာဝ ကို အကြမ်းဖျင်း တွက် လို့ ရတဲ့ နည်း ရှိတယ်။ သင့်ရဲ့လူသိများသောအမည်ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွက်ပါ။ အ-အာ-ဥ-ဩ-ဧ = ၁ က-ခ-ဂ-ဃ-င. = ၂…
September 18, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဗဟုသုတNo Comment on ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သိထားသင့်တဲ့ နောင်တ (၁၀) ပါး ဆိုသည်မှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သိထားသင့်တဲ့ နောင်တ (၁၀) ပါး ဆိုသည်မှာ ၁။ ငယ်စဉ်အခါက ပစ္စည်းဥစ္စာမရှာခဲ့၍ အိုမင်းရင့်ရော် နောင်သောအခါမှ မရှိဆင်းရဲ မွဲပြာကျသောကြောင့် နောင်တကြီးစွာရခြင်း။ ၂။ ငယ်ရွယ်စဉ်က ပညာသင်ရန် အခွင့်ရေးရပါလျှက် ဆုိးပေတေကာ ကျောင်းပြေးလုပ်၍…
အကြွေးတွေ အကြေဆပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
September 17, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)celebrityNo Comment on အကြွေးတွေ အကြေဆပ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မင်းသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေကစ်တစ်ယောက် ပရိသတ်တွေအတွက် ပေးစရာကျန်နေသေးတဲ့ ပုံအကြွေးတွေအတွက် သူမရဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ OPPO F9 ပွဲလေးကို တက် ရောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေကစ်တစ်ယောက် လက်ပြတ်အင်္ကျီလေးနဲ့ အရမ်းကိုလှလွန်းနေပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။…
September 17, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ထူးဆန်းထွေလာ / အစားအသောက် / အားကစားNo Comment on အဝစား ဆူရှီဆိုင်ကနေ ရာသက်ပန် စားခွင့်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဂျာမန်အားကစားသမား
ရေကူး၊ စက်ဘီးစီးနဲ့ အပြေးစတဲ့ အားကစား(၃)မျိုး ပေါင်းစည်းထားတဲ့ အားကစားကို Triathlon လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဂျာမနီက triathlete အားကစားသမားတစ်ဦးကို အဝစား ဆူရှီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ လာစားခွင့်တစ်သက်တာ ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက် (၃၀) အရွယ်…
တိုင်ဖုန်းမန်ခွတ် ဟောင်ကောင်မှာ ရက်ရက်စက်စက်ဝင်မွှေ ဗီဒီယိုကြည့်ရန်
September 17, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)မိုး​လေဝသ သတင်းNo Comment on တိုင်ဖုန်းမန်ခွတ် ဟောင်ကောင်မှာ ရက်ရက်စက်စက်ဝင်မွှေ ဗီဒီယိုကြည့်ရန်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီး လူပေါင်း ၅၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ စူပါတိုင်းဖုန်းမုန်တိုင်း မန်ခွတ်ဟာ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က တရုပ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကမ်းခြေရှိ ဟောင်ကောင်ကို ဗြောင်းဆန်နေအောင် ဝင်မွှေခဲ့ပါတယ် Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန်…
သင်လုံးဝမသိတဲ့ တောင်အောက်ကနေ တောင်ပေါ်ကို ပြောင်းပြန်စီးတဲ့ ပြောင်းပြန်ရေတံခွန်
September 17, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ထူးဆန်းထွေလာ / ဗဟုသုတNo Comment on သင်လုံးဝမသိတဲ့ တောင်အောက်ကနေ တောင်ပေါ်ကို ပြောင်းပြန်စီးတဲ့ ပြောင်းပြန်ရေတံခွန်
အိန္ဒိယမှာ ရေတံခွန်ပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ် အေးစက်နေတဲ့ရေတံခွန်တွေ ရေအောက်ထဲက ရေတံခွန်တွေ တောင်အောက်က ရေတံခွန်တွေ အများကြိးရှိပါတယ် အဲ့ထဲက အထူးဆန်းဆုံးကတော့ လုံးဝမထင်မိစရာ တောင်အောက်ကနေ တောင်ပေါ်ကို ပြောင်းပြန်စီးတဲ့ ပြောင်းပြန်ရေတံခွန်ပါပဲ ဒါဟာတကယ်အတော်လေးမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ဇောက်ထိုး စီးဆင်းနေတဲ့ ရေတံခွန်လေ တစ်ခါတစ်လေ…
တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ . ဇင်ယော်နီ (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၇ မှ ၂၃)
September 17, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)​ဗေဒင်​No Comment on တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ . ဇင်ယော်နီ (၂၀၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၇ မှ ၂၃)
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေဝင်တာ၊ ငွေကိစ္စ ခရီးသွားရတာ၊ ထီပေါက်သလို ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ၊ မတင်မကျဖြစ်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေတတ်ပါတယ်။ သေချာစီစဉ် ထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်း လွဲသွား၊ ချော်သွားတတ်တယ်။…
မျောက်တွေဆောက်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ တံတား (သို့) ရာမတံတား (သို့) အာဒမ်တံတား
September 17, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဗဟုသုတNo Comment on မျောက်တွေဆောက်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ တံတား (သို့) ရာမတံတား (သို့) အာဒမ်တံတား
ဒီတံတား ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ အကြားမှာရှိတဲ့ တံတားဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ Tamil Nadu ကျွန်းဆွယ် နဲ့ သိရိလင်္ကာအနောက်မြောက်ပိုင်းက Mannar ကျွန်းတို့ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့တံတားပါ။ ဒီတံတားကို ရာမတံတား လို့ခေါ်တဲ့အပြင် ဟာနုမာန်တံတား…